Nosakanana Tao Shina Ny Fetibe Gala Lohataona Shanzhai · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Aogositra 2017 11:46 GMT
Ny takarivan'ny 25 janoary 2009, tany an-trano ny ankamaroan'ny Shinoa tao Shina Tanibe, mankafy ny taona sy sakafo hariva teo am-piandrasana ny Taombaovao manara-bolana. Fialam-boly mahazatra amin'ny alina eo anivon'ny fianakaviana ny mijery ny Fetibe Gala Lohataona alefan'ny CCTV. Tamin'ity taona ity, afaka nanana safidy hafa izy ireo, na izany aza dia…
Mpiserasera iray, Lao Meng nanomana hikarakara Fetibe Gala Lohataona hafa antserasera, antsoina hoe Gala Lohataona Shanzhai (Ny dikan'ny Shanzhai dia orinasa na tanàna an-tendrombohitra ao an-tanindrazana), tamin'ny volana Novambra 2008. Niantso mivantana hisian'ny fandraisana anjara izy ary nahavita nahazo fampisehoana 35. Nomanina havoaka amin'ny aterineto amin'ny alàlan'ny tranonkala mpampiantrano lahatsary, Tecent sy UUSee, amin'ny takarivan'ny 25 janoary ny Gala.
Na dia izany aza, tamin'ny fiandohan'ny volana janoary, namoaka filazana mitaky amin'ireo haino aman-jery rehetra mba tsy hitatitra momba ny Shanzhai Gala ny Fitondram-panjakana misahana ny Radio sy Televiziona. Ankoatra izay, noho ny antony tsy fantatra, nofoanana ny famandrihan-toerana tamin'izany alina izany ary voatery nandrakitra ny fampisehoana i Lao Meng ary namadika ny “fampisehoan'ny vahoaka” ho fihaonana sy fankalazana teo amin'ny samy mpinamana.
Nahavita nandrakitra ny fampisehoan'izy ireo tamin'ny 22 Janoary i Lao Meng sy ireo namany. Na dia izany aza, tsy afaka namoaka ny lahatsary izy ireo rehefa nomarihana fa “Shanzhai Spring Gala” ny horonantsary. Na dia tsy nanisy marika ny horonantsary aza izy ireo, tapaka eny anelanelan'ny famindrana tahiry ny fampidirana izany. Tamin'ny 2 Febroary, nitatitra ny mpanao gazety avy ao amin'ny Beijing News fa tsy nahita lahatsary momba ny Shanzhai Spring Gala mihitsy tao amin'ny tranonkala antserasera 56 mpampiantrano lahatsary ao Shina. Nieritreritra i Lao Meng fa nosakanan'ny governemanta ny fampisehoana noho ny filazana fa hetsika fanoherana ny [zavo-tsetroka] izany.
Ny teny filamatry ny Shanzhai Spring Festival Gala dia “Spring Festival Gala ho an'ny Vahoaka, avy amin'ny vahoaka”, ary natao ho an'ireo mpiasa mpifindra monina ambanivohitra, mpianatra sy ny Am-pielezana izay tsy afaka miverina an-tanindrazana mba hihaona amin'ny fianakaviana ny fampisehoana. Azo inoana fa mahita izany toy ny fanamby ho an'ny toeran'izy ireo ny CCTV sy ny departemantan'ny fampielezan-kevitra .
Tao amin'ny 163.com, maherin'ny 200 ireo fanehoan-kevitra mikasika ny fanakanana ny Shanzhai Gala, mitsikera ny ampihimamban'ny CCTV ny ankamaroan'izy ireo. Ireto ambany ireto ny sasany tamin'izany fanehoan-kevitra izany:
Tetidratsy ity, nitady momba ny fetibe gala lohataona Shanzhai ny alin'ny faran'ny taona aho, tsy azo nidirana avokoa ny rohy rehetra. Ratsy fitondran-tena ny CCTV, tsy sahy mifanatrika amin'ny mpifaninana ary manao hafetsifetsena. Noho ny farany, efa nampoizina ny CCTV gala, mahasosotra!
Mahantra ny CCTV, ka mora ampitahorin'i Shanzhai
Raha tsy afaka mandefitra amin'ny fandaharana antserasera tahaka ny fetibe gala Shanzhai Spring ny firenena iray, efa hifarana atsy ho atsy ity firenena ity.
Tena CCTV, tena Shina
Afaka mahita ny Shanzhai Spring Festival Gala ao amin'ny youtube ianao (na dia izany aza, sarotra ny manavaka izay tena famokarana nataon'i Lao Meng satria maro ireo mampiasa ny marika Shanzhai mba hampitombo ny lazan'ny lahatsary). Ho an'ny Shinoa tanibe, afaka miditra amin'ny alalan'ny Proxy sy TOR izy ireo.
Vaovao fanampiny avy amin'ny DANWEI sy hollywoodreporter.
20 ora izayAfrika Mainty